Cholangitis - लक्षण र उपचार
Cholangitis - एक रोग सूजन द्वारा विशेषता र पित्त नलिकाहरु को सामान्य संचालन को उल्लंघन। यस रोगले अन्तर्राष्ट्रिय र असाधारण पित्तिका दुवै रोगहरूलाई असर गर्न सक्छ। Cholangitis 50-60 वर्ष को उमेर मा निष्पक्ष सेक्स को प्रतिनिधियों को लागि संवेदनशील छ, यद्यपि त्यहाँ रोगहरु (पुरुषहरु सहित) मा रोग को निदान को मामला हो।
Cholangitis को लक्षण
लक्षणहरु र चोलंगाइटिस को समयमै परिकल्पना को ज्ञान - चीजहरु संग जुडे। तथ्य यो छ कि रोग को लक्षण सजिलै संग अन्य रोगहरु को अभिव्यक्ति संग भ्रमित हुन्छन्। यसको कारण, एक सही निदान धेरै ढिलाइ स्थापना गर्न सकिन्छ, र तदनुसार, उपचार अधिक गम्भीर र लामो हुनेछ।
Cholangitis बिकरिया र विभिन्न परजीवीहरु को कारण छ कि पतला नलिकाहरु घुसने को कारण हुन सक्छ। प्रायः, ई। कोली रोगको परिकल्पना एजेन्ट हुन्छ, इन्टोकोकोसी, लाम्बिया, क्लेबिसिला र अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवणहरू लाई पनि हानिकारक मानिन्छ। यो ध्यान दिइन्छ कि cholangitis अक्सर पित्त को बाहिर प्रवाह संग समस्या को बीच मा विकसित हुन्छ।
यस्ता लक्षणहरूको उपस्थितिमा cholangitis को उपचार आवश्यक छ:
तापमानमा 38-40 डिग्री (तीव्र चोलङ्गाइटिसको ठेका) तापमानमा तीव्र वृद्धि;
दाहिने हाईकोचोन्ड्रियममा पीडा दुखाइ;
दुखाइ पेट, दस्तुर;
हथियारहरु को लाडो र उंगलिहरु को phalanges मा वृद्धि।
विभिन्न उमेर वर्गका रोगीहरूको लागि, लक्षणहरू फरक हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि, वृद्ध रोगीहरू कहिलेकाहीं पीडा महसुस गर्दैनन्। र बिरामीहरू बिरामीको कारण कहिलेकाहीँ विकासमा पछि लाग्दैन।
Cholangitis को उपचार शुरू गर्न को लागि धेरै महत्वपूर्ण छ, किनकी यो रोग धेरै गम्भीर परिणाम हुन सक्छ। चोलंगाइटिस को जटिलता हेपेटाइटिस, सेप्पीस, पेरिटोनाइटिस र लिभर को पनि सिरोसिस हुन सक्छ।
एंटीबायोटिक्स संग cholangitis को उपचार
पहिलो स्थानमा cholangitis को उपचार लडाई संक्रमण को उद्देश्य हुनु पर्छ। दुर्भाग्यवश, एंटीबायोटिक्स को प्रयोग को बिना, प्रबंधन को लागी लगभग असंभव छ। परिसर उपचार न केवल शक्तिशाली औषध, तर हेटोप्रोट्रोटक्टरहरू, इम्युनोमोलेटरहरू, भिटामिनहरू पनि समावेश गर्न सक्छन्। रोगीहरू लाई विशेष प्रोबायोटिक्स लिन, माइक्रोफ्लोको कायम राख्न अनिवार्य छ। केहि अवस्थामा, शल्यक्रिया आवश्यक पर्दछ।
लोक उपचारको साथ cholangitis को उपचार को अनुमति छैन, तर एक अतिरिक्त थेरेपी को रूप मा उनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईं शहद, जैतून का तेल र लेमनको मिश्रण तयार गर्न सक्नुहुन्छ:
500 मिलीलीटर मक्खन र दुई नींबूको रस संग मिलाएको 500 ग्राम।
उपाय रेफ्रिजरेटरमा भण्डार गरिएको छ र खाने देखि पहिले एक चम्मचमा तीन पटक लिईयो।
उपचार पछि शरीर को समर्थन को प्रायः प्रायः (औषधीय र सर्जिकल) एक सेट फिजियोथेरेपिक प्रक्रिया को निर्धारित गरिएको छ:
पैराफिनोथेरेपी र अन्य।
प्राथमिक sclerosing cholangitis को लक्षण र उपचार
Cholangitis को एक रूप प्राथमिक sclerosing छ। रोगको उत्पत्ति अज्ञात छ। पुरानो वा तीव्र चोलंगाइटिसको विपरित, यस रोगको स्क्वायरिंग फारमले प्रायः मानिसहरूलाई असर गर्छ। यो बीमारीले प्राय: कुनै पनि गरिरहेछ लक्षणहरूमा अनुपस्थित हुन्छन्।
यो रोग पहिचान गर्न सकिन्छ यस्ता आधारहरूमा:
गम्भीर वजन घटाने;
पेट को शीर्ष मा पेट को हमलों (जो असीमित हुन्छ);
जिगर को बढावा ।
पुरानो sclerosing cholangitis को लागि एकमात्र प्रभावी उपचार अवस्थित छैन। स्वास्थ्य को सामान्य अवस्था को बनाए राखन कोर्टिकोस्टरोइड्स, भिटामिन परिसरहरु र ड्रग्स-आस्टोस्टेटिक्स को मदद संग हुन सक्छ। उपचारको जटिलताको आधारमा निर्भर हुन्छ कि कसरी समय पत्ता लागेको थियो।
मस्तिष्क को Venous एंजियोमा
Imudon - एनालॉग
Ampoules मा Prednisolone
Polyoxidonium - इंजेक्शन
थाइरोइड ग्राउन्ड रोगहरू
तपाईंको घरमा कसरी विनाश हटाउनुहुन्छ?
स्टीव जर्नलको जीवनी
महिलाको शर्ट शर्ट
महिलाहरु को पतलून सूट 2017 - सबै अवसरहरुको लागि सबै भन्दा राम्रो फैशनेबल किटहरु
गर्भवती महिलाहरु को लागि स्विमिंग पूल मा कक्षाहरु
हरेक दिनको लागि फैशनेबल छवि
योनि खरानीको अप्रिय गंध
5 मिनेटमा कसरी दृष्टिकोण सुधार गर्न सकिन्छ?
शकरियाले आफ्नो एक वर्षीय छोराको ताजा फोटो साझेदारी गरे
महाराज संग क्रेनबेरी
हाइपोकोलेस्ट्रॉल आहार - व्यञ्जनहरु संग सप्ताह को लागि मेनू
अनुहारको लागि जिलेटिन
गर्भधारणको बेला कोकोसीक्सले किन चोट पुर्याउँछ?
कोर्क पर्दामा स्यान्डल
कसरी आलु zrazy मामिला मासुको साथ पकाउने?
माछालाई कसरी राम्रो तरिकाले तान्नु पर्छ?
कसरी चाँडो अनुहार मा मुर्गा देखि छुटकारा पाउनु?
एकछिन पछि मैले सोधेँ।
20 हत्यारों जसले हत्या गरे